Yenza isigqibo ngoku: Bamba kunye neNgxelo ngeNgxelo | Martech Zone
NgoLwesibini, Februwari 11, 2014 Douglas Karr
Siyazithanda izixhobo ezifaka ulwazi kubathengi, kodwa akukho sisombululo sinye. Ngamanye amaxesha udinga ukhetho lwemibuzo eyahlukeneyo, ngamanye amaxesha umbuzo onamandla kunye nempendulo, ngamanye amaxesha ufuna ubuqu. Ndicelwe ukuba ndibe nguMgwebi e-Indianapolis ' I-TechPoint Mira Awards ka-2014 kwaye uJoshua Hall usebenzisa isixhobo sabagwebi ukufaka ulwazi kunye nokuvota kumtyunjwa ngamnye. Esi sisixhobo esihle sesinye imveliso yezinto ezintsha Iifubhuli kwi-SproutBox.
Ugqiba njani ukuSebenza
Gqiba yahluke kancinane kwezinye… sisixhobo esikhawulezileyo (kwaye simahla ngoku) esikuvumela ukuba usasaze umbuzo oza kuvotela kuwo okanye wenqanaba kwaye ufumane iimpendulo ngokukhawuleza nangokungazami.
Nazi izizathu ezi-5 zokuBhalisela ukuThatha isigqibo
Yeyazimahla! Sebenzisa isigqibo ugqibile ukwenza izigqibo simahla. Iindlela zethu ezilula nezibekiweyo ziya kuhlala zikhululekile. Nokuba indlela yethu yezigqibo ehambele phambili, ebonisa uMatshini weSigqibo seSigqibo simahla ixesha elilinganiselweyo.
Phelisa I-imeyile Ecaphukisayo 'Phendula-Zonke' -Ukuba ubuza iqela labantu ngezimvo nge-imeyile, uhlala usenza umtya obonakala ungapheliyo weempendulo. Uninzi lwabathathi-nxaxheba bakho banomdla ngakumbi ekuthetheni lona kunokuva wonke umntu.
Yenza izigqibo ngokukhawuleza -Izinye izigqibo kufuneka zenziwe ngokukhawuleza. Qikelela ukuba sele ucela ingxelo kwangoko kwaye ubala iziphumo uhamba. Unokhetho lokunciphisa ixesha lokuphendula. Umatshini weSigqibo oSele enakho ukubala iziphumo zakho ngokuzenzekelayo kwaye nge-imeyile isigqibo sokugqibela kubathathi-nxaxheba bakho.
Yakha Ukuzithemba. Yakha iMvumelwano -Ukuba uthatha isigqibo usebenzisa isigqibo, sele bonke abathathi-nxaxheba baya kwazi ukuba ilizwi labo liviwe. Bayazi kwakhona ukuba igalelo labo liqwalaselwe ngokufanelekileyo, kwaye isigqibo senziwe ngobuchule.
Umatshini weSigqibo - Inamandla kwaye iyaNwaba! Umatshini weSigqibo oSele ukunceda ukuba wenze ezona zigqibo zinzima ngokulula. Abathathi-nxaxheba bakho banokulinganisa nganye yeempendulo zakho ngokusekwe kwiikhrayitheriya ezininzi. Xa ukuvota kuvalwa, unokuhlengahlengisa ukubaluleka kwendlela nganye. IsiGqibo soMatshini siqikelela impembelelo yezenzo zakho kwisigqibo sokugqibela kwangoko!
tags: isigqibosigqiboizinqumopollibhokisi yeshlumelosurvey